Ungayisebenzisa Kanjani Ikhodi Yakho Yokukhuthaza yeLucidPix ye-iPhone ne-Android
Abantu abaningi bathola amakhodi wokuphromotha we I-LucidPix, futhi kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ungasifaka kanjani isicelo. Ngezansi izinkomba zokuthi ungayisebenzisa kanjani ikhodi yakho yokunyusa yeLucidPix bobabili Android futhi iOS Izinhlelo.
Sebenzisa ikhodi yakho yokuphromotha ye-iPhone
Kopisha ikhodi yokuvula esikuthumele yona ku-imeyili yakho.
Vula App Store uhlelo lokusebenza.
Ngezansi kwesikrini, thinta Namuhla.
Phezulu kwesikrini, thepha inkinobho yokungena ngemvume noma isithombe sakho.
Thepha “Sebenzisa iKhadi Lesipho noma Ikhodi. ” Uma ungaboni ukuthi “Sebenzisa iKhadi Lesipho noma Ikhodi,” ngena ngemvume nge-ID yakho ye-Apple. Funda okufanele ukwenze uma ukhohlwa i-ID yakho ye-Apple.
Thepha “Ungafaka futhi ikhodi yakho ngesandla”Bese ulandela imiyalo esesibukweni ukufaka ikhodi esikuthumele yona nge-imeyili.
Uma okubhalisile kungakhonjiswa ngaphakathi kweLucidPix, sicela uthinte isithonjana somsebenzisi ngakwesokudla kwesikrini, khona-ke isithonjana sezilungiselelo / segiya ngakwesokudla phezulu. Ekugcineni, thepha Buyisela ngaphansi kokuthenga ngaphakathi nohlelo
Sebenzisa ikhodi yakho yephromoshini ye-Android
Kudivayisi yakho ye-Android, vula Isitolo se-Google Play uhlelo lokusebenza .
Thepha Imenyu Ukukhulula.
Faka ikhodi kusuka ku-imeyili yakho.
Manje usukulungele ukuphuma lapho ujabulele konke uLucidPix okufanele akunikeze. Qiniseka ukuthi hlola ibhulogi yethu ukuthola izinkomba futhi uzizwe ukhululekile Xhumana nathi uma unezinkinga.